Araka ny fomba malagasy dia zava-dehibe ny fifanajana ny zoky sy ny ray aman-dreny. Tamin’ny Ntaolo dia natahorana tokoa izany ho diso tamin’ny lalàn’ny fifanajàna izany, ary natao ho “mahafaty vorona” raha ny zandry aman-janaka no manao tsinontsinona ny zoky sy ny ray aman-dreny.
Niforona tamin'ny finoana momba ny fampinomana (fisotroana tangena) ny teny hoe "mafahaty vorona". Indraindray mantsy dia nosaikena biby na vorona ny olona nampinomina, ka raha maty ilay biby na vorona, nasaiky azy, dia natao ho “resy” koa ilay olona nosaikena. Ny maty vorona izany dia nenti-milaza ny “resy am-pinomana”ary izay fanao noheverin’ny Ntaolo ho mahafaty vorona dia nampitoviny saranga tamin’ny mosavy sy ny heloka lehibe, izay noresen’ny tangena. Ny tsi-fanatanterahana ny lalàm-panajana, indrindra izay anjaran’ny zandry aman-janaka amin’ny zoky sy ny ray aman-dreny dia nampidiriny ho amin’izany antoko izany. Ny manao teny mitanjaka eo anatrehan’ny olon-tsy heny dia isan’ny mahavoafady koa; ka raha misy tsy maintsy hidiran’ny teny manana endrika toy izany ao anatin’ny resaka dia miala salohy fito ery ny mpiteny, ka manao hoe : izay mamosavy, matesa vorona!
Ny fomba fiarahabana tamin’ny andron’ny Ntaolo dia ara-pirazanana sy ara-boninahitra.
Ny fiarahabana Andriana dia hoe “Tsaràva tompoko e?”. Ny “tsaràva” dia fanafohezana ny fanontaniana hoe “tsara ihany va?”. Dia mamaly ny Andriana hoe “Tsara ihany, tsara ihany! Manao ahoana hianao?”. Tato aoriana dia lasa fotsiny hoe “Manao ahoana hianao?”. Ny teny fiarahabana ny Andriamanjaka dia miavaka noho ny fanao tamin’ny olon-kafa. Intelo miantoana toy izao no fiarahabana azy “Sarasara tompoko e! Tsaràva tompoko e? Tsara antitra tompoko e?”. Ary ao antenatenan’ny arahaba Izy no mamaly hoe “ Tsara ihany !”.
Ny Hova sy ny olona sisa kosa dia manao hoe “ Akory izatsy izy, tompoko e?”, izay nafohezan’ny ankehitriny amin’ny hoe “Kôsy, tompoko!”. Ny famaliana dia hoe “ Manao ahoana hianao, na akory hianao?”.
Ara-pirazanana dia ny Andriana no arabain’ny Hova sy ny hafa rehetra. Kanefa misy Hova misondro-boninahitra ambony, na zoky ray aman-dreny loatra amin’ny taona niainany, dia miarahaba azy mialoha ihany ny Andriana manao “Akory izatsy izy, tompoko e?”. Ilay Hova mamaly “Tsaràva, tompoko e!”.
Amin’ny samy Andriana, dia ny vehivavy no miarahaba ny lehilahy, na dia ny zandry aman-janaka aza, satria ny lehilahy no natao ho kiadin’ny vehivavy. Ary raha samy lehilahy, na samy vehivavy, dia ny zandry no miarahaba zoky. Kanefa raha sendra zoky amin’ny taona aza, fa vinanton’olona, dia miarahaba ihany. Tena noheverina ho fahadisoana taloha raha ny Andriandahy miarahaba ny reniny sy ny zokiny vavy hoe “Tsaràva tompoko e?” ary ny vehivavy lehibe mihitsy no tsy manaily ho arabain’ny zanany lahy.
Raha samy Hova, raha samy Mainty, dia ny zandry aman-janaka no miarahaba ny zoky sy ny ray aman-dreny, na lahy, na vavy.
Na Andriana, na Hova, na Mainty, ny fanaovam-beloma dia mitovy “Veloma tompoko” na “Tsara antitra tompoko e!”.
Ny “mandra-pihaona” fanao ankehitriny dia niseho tamin’ny fahajanantany, nadika tamin’ilay teny frantsay hoe “au revoir”.
Izay mpisidika, dia tsy mitsofoka ao an-trano avy hatrany tsy akory, fa raha mbola any alatrano dia manao "haody, haody, tompoko!". Dia mamaly ny ao an-trano manao hoe : "haodiana, tompoko" na "mandrosoa tompoko".
Rehefa miresadresaka kelikely ny vahiny, raha samy avy ao an-tanàna ihany, dia itenenan'ny tompon-trano hoe : aoka hanaovana nahandro, tompoko, fa izahay vao avy nahalany ny masaka teo. Mamaly kosa ny vahiny ka manao hoe : dia misaotra, tompoko, fa vao nametra-tsotro no nankaty.
Raha vahiny avy lavitra kosa no tonga ao an-trano dia miainga moramora Ramatoa tompon-trano, rehefa avy nifampiarahaba sy nifanatsafa, ka mandeha mahandro na mampahandro hanina hampisakafoana azy. Ary raha mbola maharitraritra izany vao vita dia miala tsiny ny tompon-trano manao hoe : efa manao mahandro anie, tompoko, fa dia tsy miteniteny ê!
Ny minia manindry masaka dia mahamenatra, nefa izay sendra nahatratra masaka ka mihafahafa raha asaina, dia toa tsy matoky havana.
Na dia olon-tsy fantatra akory aza no nahita ny ntaolo teo am-pihinanan-kanina, na tao an-trano izany, na teny ivelany, dia nataony hoe: manasa tompoko! Ny famaly izany dia "misaotra tompoko, fa dia ataovy ihany ê !"
Raha misy olom-pantatra mandalo eny akaikin'ny tranon'ny tena dia atao hoe : miantranoa, tompoko. Koa dia misy mety mivily ihany indraindray, fa tsy mandalo tanà-misy havana, kanefa mandrakariva dia misaotra fotsiny noho nny fifanajana azy ilay mpandalo, fa tsy mivily tsy akory.